Fametrahana ram izay slots ampiasaina
fu dao le slot milina an-tserasera
Mpandraharaha PokerStars efa naka ny dingana iray hafa mankany amin'ny nifindrany any an-tsena AMERIKANA, taorian'ny nahazoan'izy ireo ny fankatoavana ny New Jersey Fizarana ny Lalao Fampiharana (DGE) miasa ao amin'ny fanjakana. Mpanome Amaya Lalao, izay manana ny Kintana, dia nanambara fa na ny Kintana sy Feno jery Mitongilana marika nomena fahazon-dalana amin'ny DGE fametrahana ram izay slots ampiasaina. Fankatoavana dia nomena taorian'ny famerenana ny Amaya ny fahazoana ny Kintana sy Feno jery Mitongilana ny taona 2014 fu dao le slot milina an-tserasera. Amaya CEO David Baazov nilaza hoe: "tena faly Izahay mba hanampy New Jersey ny lisitra lava be ny nifehy ny tsena izay hita PokerStars sy Feno jery Mitongilana mety mba hanolotra ny tena-bola an-tserasera ny lalao." Ny kintana no tsy niasa ao ETAZONIA hatry ny taona 2011 rehefa izany dia nakatona avy amin'ny governemanta AMERIKANA sy ny Kintana mpanorina Isai Scheinberg taty aoriana dia niatrika federaly fiampangana noho izy voalaza fa nanitsakitsaka ny taona 2006 tsy ara-Dalàna amin'ny Aterineto ny Filokana ny Fampiharana ny Lalàna sy ny tsy ara-Dalàna ny Filokana Raharaham-barotra ny Lalàna. PokerStars nanaiky tamin'ny 2012 ny handoa $731m mba handaminana ny governemanta sivily ny fiampangana fa orinasa nampiasa hosoka fomba fandraisana vola sy tratran'ny ANTSIKA famerana ny aterineto ny filokana fu dao le slot online gratis.
Ny dingana ho an'ny Kintana hiditra ny New Jersey tsena an-tserasera dia nanomboka tamin'ny 2013, rehefa Misaina Vondrona, ny teo aloha tompon'ny PokerStars, niditra tao amin'ny fiaraha-miasa amin'ny tanin-monina casino Resorts Casino trano fandraisam-bahiny. Amaya dia nahazo Oldford Vondrona, ny ray aman-dreny orinasa ny Misaina ny Vondrona, ho an'ny $4.9 bn tamin'ny volana aogositra 2014, ary amin'ny fomba ofisialy an-tsaha ho an'ny ny transactional waiver ny DGE tamin'ny oktobra tamin'io taona io ihany ho an'ny fahazoan-dalana mba hitarika ny raharaham-barotra raharaham-barotra fu dao le slot machines.
Baazov nambara nandritra ny fihaonambe antso amin'ny Diabe izay Amaya andrasana hivoaka ao New Jersey ao amin'ny fahatelo dia ampahefatry ny taona ity, afa-tsy fankatoavana dia tratra amin ' izay fotoana izay..
Ny zavatra dia ny endrika poker
Mit blackjack ekipa feno mivantana amin'ny aterineto tv
Dia zavatra zaridaina poker misokatra
Elk renirano poker mihazakazaka 2021
Rehefa ny casino handeha misokatra ao ohio
Dia lohanareo poker voavaha
Casino akaikin'ny los angeles amin'ny slot machines
3d printed poker chip rack